Dog leash Nsukka & Suppliers | China Dog leash Factory
Extra Bungee Ntughari Dog Leash
1.A na-eme ihe nkedo a na-emegharị anya nke Dog Leash mere nke ihe ABS + TPR dị elu, gbochie ikpe ahụ site na ọdịda na mberede.
2.Anyị tinyekwara ngwungwu bungee maka ụdọ nkịta a na-ewepụtasị. Ọdịdị bungee pụrụ iche na-enyere aka ịmịnye ujo nke ngagharị ngwa ngwa mgbe ejiri nkịta dị ike ma na-arụ ọrụ. mgbe nkịta gị na-apụ na mberede, ị gaghị enweta ujo ọkpụkpụ, kama nke ahụ, mmetụta bungee nke mgbanwe ahụ na-agbanwe ga-ebelata mmetụta dị na ogwe aka gị na ubu gị.
3. Akụkụ kachasị mkpa nke nkwụghachi azụ bụ mmiri. Extra Bungee Retractable Dog Leash nwere ike mmiri na-agagharị maka iji nwayọ nwayọ, ihe ruru ugboro 50,000. Okwesiri maka nkịta buru ibu dị ike, ụdị dị obere na obere ụdị.
4.Extra Bungee Retractable Dog Leash nwekwara 360Celsius tangle-free Pita leash na-enye ndị ọzọ nnwere onwe gị anu ulo ịgagharị na agaghị onwe gị ọbọp na-edu ndú.
Omenala Retractable Dog Leash
Ọ na - enyere gị aka ijigide njide siri ike nke ọma, ọbụlagodi na nnukwu nkịta na-adọpụ ma na-agba ọsọ.
Nnukwu mmiri dị n'ime mmiri a na-emegharị nkịta nwere ike ịnagide nkịta siri ike ruo 110 lbs.
Ihe a na-eme ka ihe dị egwu Dog Leash's leash bụ nke ezigbo ABS + TPR, gbochie ikpe ahụ site na ọdịda na mberede.
Ihe a nwere ike iji ihe ntanetị na-atụgharị uche nke nwere ike ịgbatị ruo 5M, yabụ ọ ga-abụ nchekwa karịa mgbe ị na-arụ ọrụ nkịta gị n'abalị.
3.Usoro Dg Ntughari Nkịta a na-eji mmiri siri ike na-agagharị agagharị, ruo ugboro 50,000. Okwesiri ike maka nkịta buru ibu, nkịta dị obere na obere nkịta.
4.Usoro Dg Ntughari Dog Leash nwekwara 360Celsius tangle-free Pita leash nyekwuo nnwere onwe gị anu ulo ịgagharị na agaghị onwe gị ọbọp na-edu ndú.
N'ogbe Retractable Dog Leash
N'ogbe retractable nkịta leash ka nke enwekwuru naịlọn eriri nke nwere ike ibu ike Anam Udeme site nkịta ma ọ bụ nwamba ruo 44lbs na ibu ibu.
The N'ogbe retractable nkịta leash gbatịrị ihe 3m, nwere ike iburu sere n'elu ruo 110lbs.
Ngwongwo nkịta a na-ere ihe n'ahịa nwere ihe eji eme ihe ergonomic, ọ na-enye ohere maka ije dị ogologo na nkasi obi, enweghịkwa nchegbu gbasara imebi aka gị. E wezụga nke ahụ, ọ''s kama na-enwu enwu ma na-amị amị, yabụ na ị gaghị enwe ike ịda mba ma ọ bụ na-ere ọkụ mgbe ogologo ije gachara.
Apụpụ akpọrọ maka obere nkịta
1.The ihe onwunwe nke Retractable Leash N'ihi Obere Nkịta bụ eco-enyi na enyi, na-abụghị na-egbu egbu, na-esi isi. Njikọ ahụ na-enye ogologo ndụ iji mee ihe, na mmiri dị elu nke siri ike na-eme ka akara ahụ gbasaa ma weghachite nke ọma.
2.Durable ABS casing nwere ergonomic adịgide na mgbochi mmịfe ahụ, ọ dị ezigbo mma ma dabara n'ọbụ aka gị, dabara aka gị dị ka ogwe aka. Ntughari mgbochi nke nkedo a na-ewepụ maka obere nkịta na-eme ka e nwee nchebe, ị na-achịkwa ihe mgbe niile. 3.Sturdy metal snap nko na ntukwasi obi attaches na Pita si olu akwa ma ọ bụ njikota.
1.Retraction traction eriri bụ eriri dị larịị dị larịị. Nzube a na - enye gị ohere ịgbanye eriri ahụ nwayọ nwayọ, nke nwere ike igbochi nkịta nkịta ka ọ ghara ikuku na ntanye. Ọzọkwa, imepụta a nwere ike ime ka mpaghara nke eriri ahụ dị ike, mee ka eriri traction ahụ bụrụ ihe a pụrụ ịtụkwasị obi, ma nagide ike dị ukwuu na-adọta, na-eme ka ọrụ gị dị mfe ma na-emeso gị ka nkasi obi dị elu
2.360 Celsius tangle-free custom heavy-waajib retractable dog leash nwere ike hụ na nkịta na-agba ọsọ kpamkpam ma na-ezere nsogbu kpatara ụdọ. Ihe nkedo ergonomic na mgbochi mmịpụta na-enye mmetụta nkasi obi dị mma.
3.Here bụ ihe nkedo ọkụ na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ na-acha uhie uhie na 1 mpịakọta akpa mkpuchi plastic na aka. Ọ bụ aka-free na-adaba adaba. Ọ ga - enyere gị aka ịnụ ụtọ ijegharị.